जसले काम गर्छ, उसैलाई भोट « Loktantrapost
जसले काम गर्छ, उसैलाई भोट
३ जेष्ठ २०७४, बुधबार ११:४५
धुलावारी । दोस्रो चरण अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २८ दिन बाँकी रहँदा झापाका ग्रामीण बस्तीमा जनप्रतिनिधि छनोटको विषयमा गम्भीर बहस हुन थालेको छ ।
पुनर्संरचनापछि बनेको स्थानीय निकायमा कस्ता जनप्रतिनिधि आउने हुन् ? राजनीतिक दललाई लाग्दै आएको आरोप चिर्न सक्ने हुन् कि होइनन् ? धेरै अधिकार रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने हुन् कि होइनन् ? भन्ने आम जनमानसमा चासो बढ्दै गएको छ ।
साविक बाहुनडाँगी–३ हाल मेचीनगर–३ निवासी गोमा सेन्चुरी स्थानीय तहको निर्वाचनले दलित र पिछडिएको जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउँछिन् । राज्यमै दलित उन्मुक्ति गर्ने घोषणा गरिए पनि अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले अझै पनि दलित समुदायलाई मान्छेको रुपमा होइन, पशुको दर्जाको रुपमा व्यवहार गरिएको बताइन् ।
४५ घर भन्दा बढी दलित परिवारको बसोबास भएको सो स्थानमा अझै पनि सडक बाटो, खानेपानी आदिको समस्या रहेको छ । सामान्य खेती किसानी गरेर जीवन चलाउँदै आएका दलित बस्तीमा अरुबेला आफूहरुले छोएको चिया समेत नखाने नेताहरु अहिले आफ्नो घरमा भोट माग्न आउने गरेको दलित अगुवाहरु बताउँछन् ।
निन्दा खोलाले बर्सेनि कटान गर्ने उक्त क्षेत्रमा दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि गए भोट हाल्ने तर पार्टीगत नेताहरुको विश्वासमा नपर्ने स्थानीय कृष्णबहादुर बागदासले बताए ।
अनेकन समस्या रहेको सो बस्तीमा निन्दा खोलाको समस्या नयाँ होइन । बर्सेनिको नदी कटान रोक्न पनि स्थानीयबासीको माग छ । उमेरले ५० नाघिसकेका गुमबहादुर तिरवाको गुनासो पनि अन्य स्थानीयको भन्दा फरक छैन । उनी भन्छन्– ‘सुकुम्वासी हामी, हामीसँग धनीपूर्जा पनि छैन । नदीको समस्या पनि उस्तै छ, किला तथा स्याउलाले खोला थामिएको अवस्था छ । अबको चुनावमा यिनै समस्या समाधान गर्न सक्ने उम्मेद्वार आए मात्र हाम्रो भोट अरुतिर जादैन ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संविधानमै एकजना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ । संविधानमा दलित महिला अनिवार्य गरे पनि पुरुष दलितका लागि कोटा भने छुट्याइएको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार झापाका ८ वटा नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाबाट १३१ दलित महिला निर्वाचित हुनेछन् ।
झापाको कुल जनसङ्ख्या ८ लाख ८ हजार ३ सय २४ छ । जसमा ५ लाख १० हजार २ सय १६ मतदाता रहेका छन् । २ लाख ५६ हजार ७ सय ९८ महिला मतदाता रहको झापामा २ लाख ५३ हजार ४ सय १५ पुरुष र ३ जना तेस्रो लिङ्गी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
मेचीनगर–३ निवासी झमकलाल विश्वकर्मा विकास निर्माणको कुरा भन्दा पनि समाजले दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यसअघिका चुनावमा भोट माग्न नेताहरुको लर्को लागे पनि निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टदेखि निर्वाचित वा हारेका नेताहरुको अनुहार पनि देख्न नपाइएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
यो स्थानीय तहको चुनावमा साझा उम्मेद्वारलाई भोट दिने दलित अगुवाहरुको भनाइ छ । उनीहरु भन्छन्– ‘यो बाहुन, यो दलित, यो आदिवासी नभनी जो सबैलाई समान व्यवहार गर्छ, विकास निर्माणका कार्य गर्छ, भोट उसैलाई हालिन्छ ।’
दलित समन्वय समिति विर्तामोडका अध्यक्ष छविलाल विश्वकर्माले जिल्लाका १३१ वडामा सक्षम महिला प्रतिनिधि कसरी चयन गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको बताए । सक्षम प्रतिनिधि छान्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।